Saameynta abaarta Spain iyo cawaaqibkeeda | Saadaasha Shabakadda
Abaartu waa dhacdo dabiici ah oo ka kooban hoos u dhaca roobka ka hooseeya celceliska (taas oo caadi ka noqon laheyd aag) iyo, sidaas darteed, hoos u dhaca ilaha biyaha ee la heli karo, ha ahaadeen kaydadka biyaha iyo hareeraha. Isbaanishka wajihi, dhamaadka 2017, iyadoo abaartii ugu darneyd 20-kii sano ee la soo dhaafay.
Maxay Spain sameyn kartaa si ay u joojiso xaaladdan?
1 Abaartii ugu xumeyd
2 Sannad aad u qalalan
3 Abaarta ka dib
Abaartii ugu xumeyd
Roob la'aantu waxay yareynaysaa heerarka keydadka ee dooxooyinka koonfur-bari iyo, sidoo kale cabsi, kuwa waqooyi-galbeed. Heerarku waa qiyaastii 30%, qiimayaasha aan weligood la arkin ilaa 1990.
Biyaha la xayiray, oo aan la tirinaynin roobabkii ugu dambeeyay, waa 20 dhibcood oo ka hooseeya celcelis ahaan 10-kii sano ee la soo dhaafay. Cimilada Isbaanishku waxay ahaan jirtay weligeedna ahaan doontaa mid qalalan, iyadoo wareegyada abaaruhu ka badan yihiin ama ka yar yihiin 3-4 sano. Si kastaba ha noqotee, abaartan ayaa ah tii ugu darneyd muddo ka badan 20 sano.
Xaaladan biyo la'aantu waxay ku noqoneysaa mid jilicsan jiinaca sida Miño-Sil, Segura, Júcar, Guadalquivir iyo gaar ahaan Duero, iyadoo ku dhowaad 30% ay ka yar tahay 10 sano ka hor.
Marka la fiiriyo xaalada juquraafi ahaaneed ee Spain iyo dhulka, abaaruhu waa wax caadi ah. Sidaa darteed, 75% dhulka Isbaanishku wuxuu u nugul yahay xaalufka. Muddadii u dhaxeysay 1991-1995 waxaa horey u jirtay dhacdo abaar oo tan la mid ah oo leh qiime hoose.
Abaartan waxaa sababay roobabkii yaraa ee 2014 iyo 2016, oo ay ka da'een 6% ka hooseeya celceliska. Intaas waxaa sii dheer, ilaha roobabku waxay leeyihiin roobab yar oo shabakadaha saadka ee dadweynaha waxay lumiyaan ku dhowaad 25% oo biyo ah.
Dhammaan arrimahan waa inaan ku darnaa kororka dalxiiska ku dhowaad dhammaan dhulka Isbaanishka, way kordheen meelaha beeraha ee waraabka iyo, kororka celceliska heerkulka, sidaas oo kale ayaa heerka uumi baxa biyuhu.
Sannad aad u qalalan
Sannadkan biyo-biyoodka, oo dhammaaday bishii Oktoobar ee sannadkan, wuxuu ahaa mid aad u qalalan guud ahaan. Meelaha ugu cagaaran Spain sida Galicia, waqooyiga Castilla y León, qayb weyn oo ka mid ah Asturias iyo Cantabria ayaa sidoo kale hoos u dhac weyn ku yimid roobabku.
Meelaha ugu qalalan sanadka waxay shaki la’aan yihiin Extremadura, Andalusia iyo Kaneerooyinka. Bulshooyinkaas roobka kama badnayn 75% qiimaha caadiga ah, taasoo ka dhigeysa sanadkii sideedaad iyadoo ugu roob yar tan iyo 1981.
Tan iyo markii sannadkan cusub ee biyo-biyoodku bilaabmay (2017-2018), xaaladdu way ka sii xumaatay. Iskucelceliska xogta 150 litir halkii mitir laba jibbaaran ee sida caadiga ah la aruuriyay laga bilaabo Oktoobar ilaa Nofeembar, kaliya waxaa la soo ururiyay 63. Taasi waa, 58% waxay ka yar tahay sida caadiga ah.
Abaarta ka dib
Meelo badan oo kaydad ah oo ku yaal Spain tuulooyinka ayaa ka soo baxay kuwaas oo ku jiray biyaha hoostooda marka la eego heerka hooseeya ee biyaha. Magaalooyinkaas Waxay quusiyeen ilaa 60-yadii, inta lagu gudajiray abuurista inta badan kaydadka Isbaanishka. Qaar ka mid ah magaalooyinkan iyo taalooyinka waa kaniisaddii hore ee Santa Eugenia de Cenera de Zalima oo ku taal Aguilar de Campoo (Palencia) iyo magaaladii hore ee Mansilla ee La Rioja.
Dhibaatooyinka ugu waaweyn ee abaartu keento dadka waa dhibaatada saadka. Dhimista biyaha ayaa lagama maarmaan u ah ilaalinta kheyraadka biyaha inta ugu macquulsan. Dowladdu waxay hubisaa inay shaqeyneyso ugu badnaan si looga fogaado xayiraadaha biyaha. Si kastaba ha noqotee, haddii xaaladdan ay sii socoto, dadka qaar waxay dhibaato kala kulmi doonaan biyo-gelinta.
Sidaad aragto, sameynta wanaagsan ee isticmaalka biyaha waa mid ka mid ah tiirarka aasaasiga u ah waddan si joogto ah abaar ugu hayso. Ku luminta 25% shabakadda saadka dhammaantood waa qashin aynaan oggolaan karin. Si looga fogaado xaaladan, dadka waa in wax la baro si ay uga faa’iideystaan ​​hantidan qaaliga ah ee yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Abaaraha » Saamaynta abaarta Spain